Gbasara anyị-Rudong Sunny Glove Co., Ltd.
Carbon Fiber ESD Gloves
Metallic Fiber ESD Gloves
Iberibe Ebube Na-eguzogide
PU mkpuchi mkpuchi
Ulo nchekwa ndi ozo
Omolọ ọrụ ụgbọ ala
Nhazi na ntinye nke iko
Ị nọ ebe a : >lọ>Gbasara anyị
Rudong Sunny Glove Co., Ltd., nke e guzobere na 2010, bụ onye nrụpụta ọrụ nke ngwa ngwa nchekwa dị iche iche. Dị ka ESD gloves, Anti-static gloves, Anti-cut gloves wdg.
Thelọ ọrụ ahụ nwere igwe nrụpụta zuru oke nke ihe nrụpụta, nke ahụ gụnyere ihe ọkpụkpọ igbe abụọ nke 160 nke igwe akpaka akpaaka, akpaaka PU na-etinye aka na mkpịsị aka yana n'ọbụ aka, usoro anọ nke igwe na-ebi akwụkwọ na igwe na-eji aka na-akpaghị aka. ọ nwere ike mezue ngwaahịa agbakọtara na naanị ihe owuwu.
Companylọ ọrụ ahụ amịpụtara na mmepụta carbon fiber gloves, ọla aka ọla aka, ịkpụ aka na-egbu egbu, uwe aka na-egbochi, polyester na uwe naịlọn na ụdị ndị ọzọ. A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe n'ọtụtụ ebe nke ụlọ ọrụ elektrọnik, semiconductor, mgbakọ akụkụ akpaaka, nkwakọ ngwaahịa, mgbakọ ọkụ, ụlọ ọrụ na-enweghị ntụ na ndụ kwa ụbọchị.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso echiche nke azụmahịa nke "mma, arụmọrụ, iguzosi ike n'ezi ihe na ihe ọhụrụ". Thelọ ọrụ ahụ agafeela asambodo njikwa sistemụ ISO9001, ngwaahịa ndị agafeela asambodo SGS, CE. E wezụga nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike ịnye ngwaahịa na ọrụ kachasị mma maka ndị ahịa. Maka nke a, ngwaahịa niile na-ere nke ọma gburugburu ụwa, gụnyere Europe, America, Japan na mba ndị ọzọ ndịda ọwụwa anyanwụ Asia.
N'iji ohere a, anyị na-atụ anya ịkwado gị, ịmepụta ọmarịcha ọdịnihu ọnụ!
(afọ) Ahụmahụ ụlọ ọrụ
(ọdụ) igwe na-ejikọ ọnụ
(edemede) Line mkpuchi
gỊNỊ Họrọ US
Mkpa ike anyị, ire ike ụwa
Akụkọ na-eguzogide ule nyocha
Zipu ozi kọntaktị email gị, anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge.
Enweghị 21-8 Xingye okporo ụzọ Caobu Town Rudong County Jiangsu Province, CHINA.
Nwebisiinka: Rudong Sunny Glove Co., Ltd.